Dagaal culus oo socda Degmada Marka kaas oo u dhexeeya ciidanka DFS
March 22, 2013 - Written by
Marka:-Wararka naga soo gaaraya Degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan DFS waxaana uu dagaalka ka qarxay deegaanka Buufow wuxuuna ku soo fiday markii danbe gudaha Degmada Marka.
Dagaalka ayaa haatan si goos goos ah uga socda bartamaha Degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose waxaana ku dhintay ilaa 5 qof oo ka tirsan ciidamada dowlada federaalka waxaana ku jira dadka dhaawacmay sida warar hordhac ah ay sheegayaan taliyaha ciidamada Milateriga ee Degmada Marka.
Ciidamada uu dagaalka ka dhex qarxay ayaa u kala jabay laba beelood waxaana dagaalka uu ka socdaa xarunta degmada ,Isbitaalka iyo saldhiga booliska ee magaalada Marka waxaana la isku adeegsanayaa gawaari Tikniko ah.
Dagaalka ayaa waxaa ilaa haatan ka hadal saraakiisha sare ee ciidanka DFS waxaana isha ka daawanaya ciidamada AMISOM ee ku sugan duleedka Degmada Marka .
Dadweynaha rayidka ee ku dhaqan Degmada Marka ayaa u kala cararay guryahooda waxayna ay la fajacsan yihiin sida ay ciidanka qaran u noqon doonaan ciidan isku heysta Isbaaro beelana u kala jabaya markay is khilaafaan.